श्रीमद्भागवत गीताले वर्ण र जात विभेदबारे के भन्छ? - LiveMandu
श्रीमद्भागवत गीताले वर्ण र जात विभेदबारे के भन्छ?
श्रीमद्भागवत गीता को ५ को १८
अर्थात साधू त्यही हो जसले ब्राह्मणसंग केही ज्ञानको अपेक्षा राख्दछ, र समान दृष्टिले गाई, हात्ति, कुकुर या अन्य सबै मान्छेलाई हेर्न सक्दछ । यहाँ ब्राह्मणले कुनै जात या वर्ण नभईकन विधाका प्रवाहक भनि संकेत दिएको छ भने हात्तिले वलवान, कुकुरले निर्बल, गाईले निर्धा अनि अन्य मान्छेले समस्त बिश्वको प्रतिनिधित्व गरेको छ । सबैलाई समान रुपले लिन सक्ने व्यक्तिलाई साधु भनि उल्लेख गरेको सनातन सस्कारले जात या वर्णका रुपमा बिभेद कहिंकतै गरेको छैन् ।
आज हिन्दुत्व अनि सनातन संस्कारको सबैभन्दा दुर्बल पक्ष नै वर्ण र जातको बिभेद भएको छ । वर्ण र जातको बिभेदलाई पुरातनवादि भनेर बिभिन्न आरोप लगाइएपनि वास्तवमा यो पुरानो जमानाको नभइकन पछि आएर अपव्याख्या भएको तथ्यका रुपमा छ । सामाजिक व्यबहार अनि धार्मिक चिन्तन धेरै हदसम्म फरक कुरा हो, जातिय बिभेद अनि वर्ण बिभेदलाई धार्मिक चिन्तन भन्दा पनि सामाजिक व्यबहारका रुपमा पनि लिइन जरुरी छ । हिन्दुत्वले कर्म र धर्मको प्रष्ट फरक छुट्याएर राखेको छ, कर्मका आधारमा धर्मलाई जोडेको हिन्दु संस्कारमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अनि शुद्र सबै जातहरु ऊँच या नीच नभइकन कर्मका आधारमा फरक राखिएको तथ्य छ ।
कर्मका आधारमा व्याख्या गरिएको यस श्लोकले कर्मकै आधारमा ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य अनि शुद्रको कार्य व्याख्या गरेको छ । सबैलाई समान मान्दै यस श्लोकले ब्राह्मण बिराट पुरुष, क्षत्रिय आफ्ना बाहु, बैश्यहरु आफ्ना तिघ्राका बल अनि शुद्ध्रहरु आफ्ना पैतालाका माध्यमवाट समान अनि सम्माननिय रहने जनाउँदछ ।
श्रीमद्भागवत गीतामा स्वयम भगवान श्रीकृष्ण भन्छन्:
Tags: जातश्रीकृष्णश्रीमद्भागवत गीता
देश पिच्छे फरक छन रक्तदानको नियमहरु
तस्वीरमा वग्दादको हिमपात